Tubing Fekitori - China Tubing Vagadziri, Vatengesi
Yakagadzirirwa kukwirira-kuchena kunyorera, Huiyu Silicone Tubing's -yakatsetseka-yemukati muboora inogona kudzora njodzi yekuvharirwa kwezvimedu uye microscopic buildup panguva inonzwisisika yekushambadzira kwemvura. Kuongorora kwemukati meimba yemukati peSanitary Silicone Tubing kana ichienzaniswa nedzimwe silicone tubing inoratidza kuti inosvika katatu kutsetseka. Pamusoro pezvo, nzira inoyerera yemvura inofambisa nzira yekuchenesa yakakwana uye kubereka. Kushandisa platinum-kurapa maitiro, Huiyu Sanitary Silicone Tu ...
Nhanganyaya uye akakosha maficha Viton® fluoroelastomer hose Viton zvinhu neiyo 100% Yakachena - yakakwira kuita synthetic yerabha; Kunaka kupisa kupisa: -40 ° F mukuchengetedza mukati me400 ° F tembiricha, kupisa kwepakati pa600 ° F; Kugona kutsigira mhinduro yakanyanyisa uye makemikari kupfuura chero rabha rekutengesa; Iyo yakanakisa shiviriro yemhando dzakasiyana dzemafuta, mafuta, mafuta, uye mazhinji emamineral acids; VITON fluorine rubber hose inogona kumira yakawanda aliphatic uye kunhuhwirira ...
Nhanganyaya uye akakosha maficha Tygon # R-3603 makemikari ongororo zviridzwa hosipa Mishonga kune zvese zvinowanzo shandiswa murabhoritari inorganic makemikari; Yakapfava, yakajeka, uye yakapusa kukwegura embrittlement, mweya kuomesa pane irabha chubhu; Yakanaka yakaderera-tembiricha kuramba, yekushandisa mu -43 ℃ ichiri kuchengetedza kushanduka; Inogona kushandiswa seye condenser, incubators, trachea, uye mamwe marabhoritari edhiyo pombi uye peristaltic pombi tubing. Tsanangudzo Material chubhu nhamba ID (mm) Wall t ...
Nhanganyaya uye akakosha maficha PharMed® peristaltic pombi hosi yezvinhu zvakasanganiswa, tsvagurudzo yesero nekushandisa kwenguva refu peristaltic pombi, hupenyu hwakareba kupfuura silicone chubhu ka30; Inogona kudzokororwa autoclave mbereko; Mukuenderana neUnited States USP Kirasi VI, FDA uye NSF zviyero; Its biocompatibility kumusoro ISO10993 zviyero; Tightness makumi matanhatu akasimba pane iyo silicone tubing. Tsanangudzo Material Tube Tube nhamba ID (mm) Wall ukobvu (mm) Inokodzera pombi musoro M / pasuru Pha ...
Nhanganyaya uye yakakosha maficha Norprene®Chemical hose Iyo ine yakanakisa makemikari kusagadzikana uye hwakareba hupenyu hwehupenyu Teflon yemukati madziro eiyo hosi yezvinhu, inotsvedzerera pamusoro, isina epurasitikiizers, anti-mvura adsorption, hapana kunwa; Rokunze rukoko rwehurefu-hupenyu hwekupfeka-husinga gadzike zvinhu, rakanakira maacid, alkalis, doro, maketoni uye imwe inoparadza mvura kuendesa. Tsanangudzo Material tube chubhu ID (mm) Wall ukobvu (mm) Inokodzera pombi musoro M / Package Norprene®Chemical 16 # ...
Nhanganyaya uye akakosha maficha Fluran®F-5500-A yakasimba hosi isingamiriri hosi; Inodzivisa kune akawanda acids, alkalis, mafuta, organic solvents; Yakareba-kushandiswa pane yakanyanya 204 ℃ nharaunda; Iyo inopesana zvakanyanya neozone uye nemamiriro ekunze kusagadzikana; kusimba, kugona kuchinjika, kwakanakira kutakura midhiya inokuvadza ne peristaltic pump tubing. Tsanangudzo Material Tube nhamba ID (mm) Wall ukobvu (mm) Inokodzera pombi musoro M / package Fluran®F-5500-A 16 # 3.1 ...